Abavelisi beCWDM abaXhamliyo | I-China i-Passive CWDM iFektri kunye nabaXhasi
HUA-NET Icandelo le-coarse wavelength multiplexer (CWDM) lisebenzisa itekhnoloji yokubhabha ifilimu kunye noyilo lobunini bokungahambelani kwesinyithi sokubopha isinyithi se-optics. Inika ukulahleka kokufakwa okuncinci, ukubekwa bodwa kwejelo eliphezulu, ibhendi yokupasa ebanzi, ubuntununtunu beqondo lobushushu eliphantsi kunye ne-epoxy yasimahla yendlela ebonakalayo.
IModyuli yeCWDM / I-Rack (4,8,16,18 CHANNEL)
HUA-NET inikeza uluhlu olupheleleyo lweCWDM Mux-Demux kunye neOptical Add Drop Multiplexer (OADM) ukuze zilungele zonke iintlobo zezicelo kunye nezisombululo zenethiwekhi. Ezinye zezona ziqhelekileyo zezi: IGigabit kunye ne-10G Ethernet, i-SDH / SONET, i-ATM, i-ESCON, iFiber Channel, i-FTTx kunye neCATV.
I-HUA-NET coarse wavelength division multiplexer (CWDM Mux / Demux) isebenzisa itekhnoloji yokubhabha ifilimu encinci kunye noyilo lobunini bokungqinelani kwesinyithi sokubopha isinyithi. Inika ilahleko yokufaka esezantsi, ukubekwa bodwa kwejelo eliphezulu, ibhendi yokupasa ebanzi, ubuntununtunu beqondo lobushushu eliphantsi kunye ne-epoxy yasimahla yendlela ebonakalayo.
Iimveliso zethu ze-CWDM Mux Demux zibonelela ukuya kuthi ga kwi-16-isiteshi okanye nakwi-18-isiteshi se-Multiplexing kwifayibha enye. Ngenxa yokuba ilahleko ephantsi yokufaka ifuneka kwinethiwekhi ye-WDM, sinokongeza i- "Skip Component" kwimodyuli ye-CWDM Mux / Demux ukunciphisa i-IL njengenketho. Uhlobo lwephakheji ye-CWDM Mux / yeDemux esemgangathweni ibandakanya: iphakheji yebhokisi ye-ABS, ipakethe ye-LGX kunye ne-19 ”1U rackmount.
Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, I-Sfp C ++, Imodyuli yeFiber Optical, Umthumeli weXfp, IHuawei Qsfp +, Ixabiso leHuawei Olt,